अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न | बैङ्क र भुक्तानी विकल्पहरू/मेरो भिसा शुल्क भुक्तानी - Nepal (Nepali)
तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ: होम / बैङ्क र भुक्तानी विकल्पहरू/मेरो भिसा शुल्क भुक्तानी
तपाईँको भिसा शुल्क भुक्तान गर्नको लागि निर्देशनहरू
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी
भिसा आवेदन शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया समयतालिका
बालबालिकाहरू लगायत अधिकांश आवेदकहरूले आफ्नो अमेरिकी भिसा आवदन प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि मेसिन रिडेबल भिसा (MRV) शुल्क भुक्तान गर्न आवश्यक छ । अमेरिकी सरकारद्वारा अनिवार्य बनाइएको यो शुल्क, भिसा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि भुक्तान गरिने शुल्क हो, जसलाई भिसा जारी गरिए पनि वा नगरिए पनि भुक्तान गरिनुपर्छ ।
MRV शुल्क फिर्ता हुनेछैन र यसलाई अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । आवेदनहरू पेश गर्नुभन्दा अगाडि आवेदकहरूले पहिला अमेरिका जानको लागि आफूलाई भिसा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
भिसाको आवश्यकता नपर्ने व्यक्तिका उदाहरणहरूम निम्न पर्दछन्, तर तिनीहरू यसमा मात्र सीमित छैनन्:
यदि तपाईँ औपचारिक भ्रमणको लागि A वा G भिसा को लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले MRV शुल्क भुक्तान गर्न आवश्यक छैन
यदि तपाईँ अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम (G-1, G-2, G-3, G-7 बाट सुरु हुने कार्यक्रमहरू) मा सहभागी हुनको लागि J भिसाको लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले MRV शुल्क भुक्तान गर्न आवश्यक छैन
यदि तपाईँसँग आफ्नो भ्रमणको प्रयोजनको लागि चाहिने वैध भिसा पहिलेदेखि नै छ भने तपाईँलाई भिसा आवश्यक नहुन सक्छ
यदि तपाईँ क्यानडा वा बर्मुडाको नागरिक (तर A, E, G, K वा V भिसा वर्गको लागि आवेदन दिने बाहेक) हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिसा आवश्यक नहुन सक्छ
यदि तपाईँले भिसाको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ भने कृपया तलका भुक्तानी निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् । आवेदकहरूले आफ्नो अन्तर्वार्ताको लागि अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्नुभन्दा अगाडि सफलतापूर्वक भुक्तानी गर्नुपर्छ । आफ्नो भिसा प्रकारको लागि सही शुल्क भुक्तान नगर्ने आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ता निर्धारण गर्नबाट रोक लगाइन सक्छ ।
प्रारम्भिक अन्तर्वार्तालाई निर्धारित गरिसकेपछि, आवेदकहरूले सीमित सङ्ख्यामा मात्र आफ्नो अपोइन्टमेन्टलाई पुन: निर्धारित गर्न पाउनेछन् । यदि तपाईँ आफ्नो निर्धारित अपोइन्टमेन्टको समयमा पुग्न सक्नुभएन भने अर्को अन्तर्वार्ता निर्धारण गर्नको लागि तपाईँले पुन: MRV शुल्क भुक्तान गर्न आवश्यक हुनसक्छ । तपाईँले अतिरिक्त भिसा आवेदन शुल्क भुक्तान गर्न नपरोस् भन्नको लागि कृपया त्यसै अनुसार योजना बनाउनुहोस् । भिसा आवेदन शुल्क फिर्ता हुने छैन ।
जारी शुल्क (रेसिप्रोसिटी शुल्क)
तपाईंको नागरिकताको आधारमा र भिसाको प्रकार तपाईं को लागी आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई भिसा जारी वा "पारस्परिकता" शुल्क तिर्न पनि सक्छ। यो शुल्क एमआरवी शुल्क होइन र एक नियुक्ति अनुसूची गर्न प्रयोग गर्न सकिँदैन। कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले अग्रिम शुल्क मात्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने तपाई अघिल्लो पटक नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ र साक्षात्कार छूट च्यानल मार्फत तपाइँको आवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो साक्षात्कार नियुक्ति अनुसूची गर्दै हुनुहुन्छ भने, अग्रिम शुल्क तिर्नु हुँदैन शुल्क; यूएस दूतावास / कन्सुलर जनरल को कन्सुलर सेक्शन मा तपाइँको साक्षात्कार को शुल्क को भुगतान को m nरूप मा भुगतान गरिनु पर्छ।
लागु हुने रेसिप्रोसिटी शुल्क रकमहरूको बारेमा थाहा पाउन कृपया यो पृष्ठमा हेर्नुहोस् ।
MRV भिसा शुल्क तिर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। NIBL बैंकमा नगद, ATM , वा ऑनलाइन मार्फ़त तिर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक विकल्पहरु हाम्रो ऑनलाइन प्रणालीमाँ भुक्तान गर्दछन्। उचित राशि भुक्तान र सो राशिलाई समयमा सक्रिय गर्न, पहिले यहाँ एउटा प्रोफाइल सृजनगरी शेडूल अपॉइंटमेंट विकल्प चयन गर्नुहोस्। भुक्तान पुष्टि स्क्रीनमा तपाइँलाई भुक्तान विकल्पहरु र कसरी भुक्तान प्रारम्भ गर्नै थप विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।
नोट: तपाइँको रसीद सक्रिय हुन भुक्तानी को समय देखि 1 व्यापार दिन सम्म लिन सक्छ। यदि तपाइँ समूहको लागि भुक्तान गर्नु हुँदैछ भने ग्रुप अपॉइंटमेंट पृष्ठमा जानुहोस्।
तलका कदमहरु हेर्नुहोस्।
हाम्रो अनलाइन आवेदक प्रणालीमा लग-इन गर्नुहोस् र एउटा प्रोफाइल बनाउनुहोस् । यसले सही रकम भुक्तान गरिएको छ र सो समयमै सक्रिय भएको छ भनी सुनिश्चित गर्दछ ।
तपाईँको स्क्रिनको बायाँपट्टि रहेको मेरो अपोइन्टमेन्ट निर्धारण विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् । भिसा प्रकार, पोस्ट, भिसा वर्ग र भिसा क्लासका चरणहरूलाई पूरा गर्नुहोस् ।
भुक्तानी स्क्रिनमा पुगेपछि भुक्तानी विकल्पहरूमा क्लिक गर्नुहोस् । भुक्तानी गर्ने बारे अतिरिक्त जानकारीको लागि यस पृष्ठमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानीको समीक्षा गर्नुहोस् ।
नेपाली रुपैयाँमा दिइएका रकमहरू यु.एस. डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटद्वारा निर्धारित कन्सुलर मुद्रा विनिमय दरमा आधारित छन् । आफ्नो भिसा प्रकारको लागि सही शुल्क भुक्तान नगर्ने आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ता निर्धारित गर्नबाट रोक लगाइन सकिने छ ।
तपाईँले आफ्नो भिसा शुल्क भुक्तान गर्नुभएको छ र तपाईँको रसिद नम्बर सक्रिय भइसकेपछि आफ्नो अन्तर्वार्तालाई निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ । कृपया तलको भिसा आवेदन शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया समयतालिका हेर्नुहोस् ।
शुल्क भुक्तान गर्ने विकल्पहरुी
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा व्यक्तिगत रूपमा भुक्तान
तपाईँले आफ्नो गैर-आप्रवासी भिसा आवेदन शुल्कलाई नगदमा (रुपैयाँ) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको कुनैपनि शाखामा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो शुल्क भुक्तान गर्दा तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा लग-इन गरेपछि उपलब्ध हुने लागुयोग्य अमेरिकी भिसा शुल्क सङ्कलन पर्चीलाई प्रिन्ट गरेर आफूसँग बोक्नुपर्छ । शुल्क भुक्तान गर्नको लागि प्रिन्ट गरिएको डिपोजिट पर्चीलाई आफ्नो साथमा लग्नुहोस् । यदि तपाईँले डिपोजिट पर्चीलाई अग्रिम रूपमा आफूले भुक्तानी गर्ने दिनभन्दा अगाडि नै प्रिन्ट गर्नुभयो भने कृपया डिपोजिट पर्चीमा रहेको म्याद हेर्नुहोस् । यदि पर्चीलाई तपाईँको भुक्तानी गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै यसको म्याद सकिएमा, केवल पुन: वेबसाइटमा जानुहोस् र एउटा नयाँ डिपोजिट पर्ची निकाल्नको लागि उपयुक्त लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् । शुल्क सङ्कलन एजेन्टहरूले म्याद सकिएको डिपोजिट पर्चीहरूको आधारमा भुक्तानीहरू स्वीकार्ने छैनन् । तपाईँको भुक्तानी प्राप्त गरिसकेपछि, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले तपाईँलाई एउटा रसिद जारी गर्नेछ । यस पृष्ठ मा विभिन्न भिसा आवेदन शुल्कहरूको बारेमा थप जानकारी दिइएको छ ।
नेपाली रुपैयाँमा दिइएका रकमहरू यु.एस. डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटद्वारा निर्धारित कन्सुलर मुद्रा विनिमय दरमा आधारित छन् । आफ्नो भिसा प्रकारको लागि सही शुल्क भुक्तान नगर्ने आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ता निर्धारित गर्नबाट रोक लगाउन सकिनेछ । तपाईँले भिसा आवेदन शुल्क भुक्तान गरिसक्नुभएपछि अभिलेखको लागि आफ्नो रसिदलाई प्रिन्ट गर्नुहोस् । आफ्नो रसिदलाई सेभ गर्नुहोस् । यदि हराएमा यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । तपाईँको रसिद नम्बर बिना तपाईँले अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्न सक्नुहुने छैन ।
अनलाइन (eBanking) - नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक खाता धारकहरुकोलागि
तपाईं लोकप्रिय र सुविधाजनक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरेर आफ्नो MRV शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसंग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा अवस्थित खाता छ भने तपाईं आफ्नो बैंक खाता देखि सीधा eBanking स्थानान्तरण प्रणाली मार्फ़त आफ्नो गैर आप्रवासी भिसा आवेदन शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो प्रोफाइलमा प्रवेश गरेपछि, भुक्तान पुष्टि स्क्रिनमा एउटा अद्वितीय खाता नम्बर प्राप्त गर्नु हुनेछ, जसमा तपाईंले NEFT वा ऑनलाइन रकम स्थानान्तरण गर्नु पर्छ। कृपया प्रत्येक अद्वितीय खाता नम्बरमाँ मात्र एक पल्ट रकम भुक्तान गर्नु होला, भुक्तानि गैर-फिर्तीयोग्य हो।
तपाइँ आफ्नो शुल्क भुक्तान गरेको अद्वितीय खाता नम्बर राख्नु होला यो महत्वपूर्ण छ। यो नंबर तपाइँको भिसा अपॉइंटमेंट शेडूल गर्न को लागि चाहिने भुक्तानको प्रमाण हो। यो नंबर राख्ने आवेदकको जिम्मेवारी हुनेछ। छैन भने, तपाईं आफ्नो भुक्तान संग अपॉइंटमेंट शेडूल गर्न सक्नुहुने छैन।
एटीएम (ATM) - नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कार्ड धारकहरुको लाग
तपाईं नेपाल भरी NIBL प्रसार को 79 एटीएम मध्ये एउटामा आफ्नो गैर-आप्रवासी (NIV) भिसा आवेदन शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ। एटीएम गर्न जानुअघि, तपाईंले हाम्रो अनलाइन प्रणाली मा प्रोफाइल सिर्जना गरी डिपाजिट स्लिप को प्रिंट लिनु पर्नेछ। एटीएम माँ तपाईंले आफ्नो कार्ड विवरण दर्जगरेपछि, 'अन्य सेवा' विकल्प भित्र 'बिल भुक्तानी' विकल्प चयन गर्नुपर्छ। यो विकल्प रोजेपछि, तपाईंले भुक्तनि विकल्पम् 'अमेरिकी भिसा शुल्क' रोज्नुपर्छ जहाँ तपाइँलाई ref नंबर प्रवेश गर्नु पर्ने हुन्छ। Ref नंबर को स्थानमा CGI ref नंबर प्रवेश गरे पछि आवेदकले सही भिसा शुल्क राशि प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेछ। डिपाजिट स्लिप माँ उल्लेखित सही रकम मात्र प्रवेश गर्नु होला। सफल भुक्तानि पछि तपाईंले अद्वितीय ' ref नंबर ' भएको रसीद प्राप्त गर्नु हुनेछ जून तपाईंले राख्नु पर्नेछ र अनलाइन वा सेवा केन्द्र मार्फत आफ्नो भिसा अपॉइंटमेंट शेडूल गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न प्रयोग गर्नु हुनेछ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा व्यक्तिगत रूपमा भुक्तान गरिसकेपछि आन्तर्वार्ता निर्धारण
तपाईँले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा उपयुक्त शुल्क भुक्तान गरिसकेपछि आफ्नो अन्तर्वार्तालाई कार्यालय खुल्ने अर्को दिनमा स्थानीय समयअनुसार बिहानको ११ बजेपछि कुनै पनि समयमा निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईँले शनिबारको दिनमा भुक्तानी गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो अन्तर्वार्तालाई आउने मङ्गलबारको दिनमा स्थानीय समयअनुसार बिहानको ११ बजेपछि कुनै पनि समयमा निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो अपोइन्टमेन्टलाई निर्धारित गर्न तलको तस्वीरमा रातो रङमा देखिएको जस्तै "युनिक सिक्वेन्स नम्बर" प्रयोग गर्नुहोस्:
भिसा आवेदन शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया समयतालिका - नगद, एटीएम (ATM), अनलाइन (eBanking) .
तपाईँले निश्चित विधिमार्फत भुक्तानी गरिसक्नुभएपछि आफ्नो अन्तर्वार्तालाई निर्धारित गर्न सक्नुहुने समयको लागि तल हेर्नुहोस् ।
अन्तर्वार्ता निर्धारण गर्नका लागि रसिद नम्बर
स्थानीय समय5बजे भन्दा पहिले भुक्तानी गर्नुहोस् अर्को व्यापारिक दिन स्थानीय समय 11 बजे। उदाहरण: यदि तपाईंले सोमबार5पछि बजे तिर्नुभयो भने, तपाईंको रसिद मङ्गलबार 11 बजे पछि सक्रिय हुनेछ। "युनिक सिक्वेन्स नम्बर"
स्थानीय समय5बजे पछि भुक्तानी गर्नुहोस् 11 बजे स्थानीय समय निम्न व्यावसायिक दिन + 1 (भुक्तानी पछि2दिन)। उदाहरण: यदि तपाइँ 5:00 बजे पछि सोमबारमा तिर्नुभयो भने, बुधबार 11 बजे पछि तपाईंको रसीद सक्रिय हुनेछ। "युनिक सिक्वेन्स नम्बर"
कन्सुलरको मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एउटा प्रोफाइल बनाउनुहोस्, र पाँच ओटा छोटा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्, जसले गर्दा हामी तपाईँले भुक्तान गर्नुपर्ने सही रकम निर्धारण गर्न सक्नेछौँ ।